ဇာတာ တစ်စောင်ကို စစ်ဆေး တော့မည် ဆိုပါက | အဓိပတိ
ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးယခင် ဝေဒ ပညာရပ်များ ထွန်းကားစဉ် ကာလ များက- ကလေးငယ် တစ်ယောက် မွေးဖွား လာပါလျှင် – မိဘ ဖြစ်သူတို.သည် ကလေး မွေးဖွားသည့် အချိန်ကို (တောရပ် ဒေသများတွင်- နေ အမြင့်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြို.ကြီး ပြကြီးများတွင်၊ ဗဟိုရ် စည်သံ၊ သို.မဟုတ်၊ အရိပ် ခြေဖ၀ါး အရေအတွက် ဖြင့်လည်းကောင်း၊) ရက်ချုပ်မှတ်တမ်း လေး ရေးမှတ် ပြီးနောက် မိမိနေထိုင်ရာ ကျေးရွာမှ- နက္ခတ်ပညာ တတ်ကျွမ်းသူ တို.ထံ သွားရောက်၍ ထန်းဖူး ဇာတာလေးများ ဖွဲ.ထားတတ်လေ့ ရှိခဲ့သည်။ သို.သော်လည်း- ဇာတာ ဖွဲ.ခြင်း သည် ထိုခေတ် အခါက- သူရိယ သိဒ္ဓန္တ ခေါ် လက်ရိုးဗေဒင် ကျမ်းကို တတ်ထားရန် လိုခြင်း၊ သို.မဟုတ် သံဒိဌ ပြက္ခဒိန် ခေါ် ဂြိုဟ်သွား ပြက္ခဒိန်များ ရှိရန် လိုခြင်း၊ အကယ်၍ ဇာတာဖွဲ. ထားပါက လည်း- ဇာတာဖတ်တတ်သူ ရှားပါးခြင်း၊ နောင်သော အခါတွင် မွေးချိန် မလိုသော မဟာဘုတ်၊ သက်ရောက် ဆိုသော နည်းများ ပေါ်ပေါက် လာခြင်း တို.ကြောင့် နောက်ပိုင်း မြန်မာတို.သည် ဇာတာဖွဲ. ရန် အသာထား၊ မွေးချိန်ကိုပင် မှတ်သား ရကောင်း မှန်း မသိကြတော့ပါ။
ထိုအခါ- စဉ်းစားတတ်သော သူအချို.အနေဖြင့် – ဗေဒင်ပညာကို အယုံအကြည် မရှိတော့ပါ။